News - The Development Trend Of pulp Nkedo Products Na Anyị Company
The Development Trend Of pulp Nkedo Products Na Anyị Company
Anyị ụlọ ọrụ a na-eto eto na pulp ịkpụzi ngwaahịa ụlọ ọrụ maka 6 afọ, n'oge nke oké ọganihu e mere. Karịsịa, a na-eji ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi na ihe eji ekpofu ihe na gburugburu ebe obibi eme ihe n'ọtụtụ ebe, mana a ka nwere ọtụtụ njedebe na mmepe nke ngwaahịa ndị a kpụrụ akpụ nke ụlọ ọrụ anyị.
(1) Ọ bụ ezie na ngwaahịa ịkpụzi pulp amalitela kemgbe ọtụtụ afọ, ọnụego ahịa ahịa adịghị elu, otu n'ime ihe ndị dị mkpa bụ na ọnụ ahịa ebu ahụ dị oke elu, ụfọdụ ndị nrụpụta na imepụta ebu ahụ ga-atụle otu esi eme ọ nwere ezigbo ntụgharị, ịbawanye ojiji nke ebu, belata ọnụahịa. Dịka ọmụmaatụ, ihe mkpuchi a na-ejikarị eme ihe, Angle guard, baffle, wdg, n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke mmepụta, nnukwu ogbe, na-ebute nnukwu ojiji nke ebu ndị a, na-ebelata ọnụ ahịa ya, nke ndị na-emepụta China anaghị eche. Ya mere, ịkpụzi ebu na nkwadebe bụ ụzọ mmepe dị mkpa. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ anyị na-ezube iji nke nta nke nta tinye n’ime imepụta na imepụta ebu. Enwere olile anya na afọ ole na ole sochirinụ iji nweta mmepụta nke ebu anyị.
(2) Ezughi oke nnyocha na slurry nkwadebe, ga-eduga na mmepụta nke pulp plastic ngwaahịa enweghị ike izute ụfọdụ pụrụ iche anụ ahụ Njirimara, ya mere enweghị ike izute ahụ n'ezie mkpa. Iji melite ngwaahịa mma, anyị factory ozugbo na-eji mbụ pulp dị ka osisi pulp, achara pulp, okpete, na-ebute ụgwọ dị elu. Ya mere, ụlọ ọrụ anyị ga-ewusi nyocha na mmepe nke ngwaahịa ịkpụzi pulp ngwaahịa, yana ruo n'ókè ụfọdụ, mụbaa imegharị na iji igbe mkpofu ahihia, akwụkwọ mkpofu na eriri ndị ọzọ, iji nweta ezi uche nke nchedo gburugburu ebe obibi .
(3) N'ihi usoro dị mgbagwoju anya nke ngwaahịa pulp ndị a kpụrụ maka ngwaahịa mmepụta ihe, enweghị ọgwụgwọ ọ bụla dị irè, na-akpata ịcha ụcha, mfe ịjụ oyi, ntutu isi, otu ụdị na ihe ndị ọzọ dị na ụlọ ọrụ ngwaahịa pulp. ngwaahịa, nke na-emetụta ngwa ya nke ukwuu. Enwere olile anya na enwere ike imeziwanye ọnọdụ site na itinye usoro ọgwụgwọ post dị irè n'ọdịnihu, iji mee ka itinye ya n'ọtụtụ ebe.
(4) Ka ọ dị ugbu a, ọ na-esiri ike iji ngwaahịa ịkpụzi pulp mee ihe dị ka ihe eji ehi ụra maka ngwaahịa ndị buru ibu, dị ka friji, ikuku ikuku na ngwa ọrụ ndị ọzọ bara ụba. Otu esi emeziwanye ike ya site na njikarịcha njikarịcha, mmelite akụrụngwa, imepụta ihe na ngwakọta ya na ihe ndị ọzọ na-echekwa gburugburu ebe obibi iji gboo mkpa nke ngwaahịa buru ibu, nke bụkwa ụzọ dị mkpa maka mmepe nke akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa-plastik.
Food mezuwo Packaging pulp Boxes, Dyeing Wrapping pulp Holder, All Ddị Of Dyeing Wrapping pulp Holder, Ejiri Agba pulp Tray, Igbe nri ngwa ngwa, Igbe Nkwakọ ngwaahịa,